Waa ayo Primus Markets INTL Ltd?
Primus Markets INTL Limited, Shirkadd caalamiga ah ee ku diwaangashan lambarka 14595, ogolaanshana ka haysta fulinta ganacsiyada "Securities" (Aaladaha maaliyadeed ama Shahaado lacag u taagan) ayna maamusho VFSC.
Waa intee saacadaha aad macaamiisha caawisaan?
Caawinta macaamisha waxaa la helaa 24 saacadood ee maalinta, 5 cisho oo usbuuca kamid ah adoo adeegsanaya Emayl ama LIVE CHAT ka bilaw 12:00 GMT+3 Axada ilaa 12:00 GMT+3 Jimcaha.
Maxay yahiin tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah in la furto akoon?
Halkan guji si aad u furato akoon bilaash ah, foomka diwaangalinta ayaa kuuso bixi doona isla dhakhsadiiba si aad u galiso xogta lagaaga baahan yahay. Kadib marka aad gudbiso diwaangalinta akoonkaaga, waxaad heli doonta fariin soo dhaweyn ah ayna lasocoto link aad kala soo dagayso softwareka ganacsiga ee (MT4)
Marka aad lasoo degto barnaamijka, fadlan raac tillaabooyinka hoose:
Furn barnaamijkaaga MT4 oo guji File > Furo akoon
Ku buuxi macluumaadkaaga shakhsiyeed, oo uu ku jiro nooca akoonkaagu yahay, khidmada lagugu kaabayo (Leverage) iyo cadadka dhigaalkaaga
Calaamadi "Waxaan ogolahay inaan la socdo akhbaaraadka" oo guji Next
Dooro "practice" server oo taabo Next
Xusuusnow macluumaadkaaga aad ku galayso iyo Fure sireedkaaga inta kadib taabo Finish, inta kadib waxaad diyaar u noqon doonta inaad bilawdo ganacsiga (Trade)
Xusuusnow in aan ku weydiisan karno inaad nooso gudbiso macluumaad dheeri ah.
Muddo intee leeg ayuu shaqaynayaa akoonka tababarashadu (Practice Account)?
Akoonkasta oo tababarashadu waxa uu shaqaynayaa 30 cisho laga soo bilaabo taariikhda aad isdiwaangalisay. Halkan guji si aad u furato akoon tababarasho oo BILAASH ah.
Sidee ayay iskugu mid u yihiin khidmadaha dilaalka iyo ka galida meesha uu suuqu marayo ee akoonka tababarashada marka la barbardhigo akoonka live-ka ah?
Khidamadaha dilaalku waa kuwo isbadala laakin waa iskumid akoonada live iyo practice labadaba. Suurtagal ma aha, si kastaba ha ahaatee, waad samayn kartaa in aad ka gasho meesha uu suuqu marayo (execution) akoonada live iyo practice labadaba. Sababtan tan loo sameeyey waxa weeye in Akoonada Practice ahi laga soo qaaday in dhamaan suuqyada ay ku jiraan iibiyayaal iyo iibsadayaal badan, wakhti kasta. Tani ma aha sida suuqa LIVE ahi u shaqeeyo. Inta lagu jiro xilliyada isbedelka suuqa, tusaale ahaan US Non-Farm Payrolls, iyo wixii lamid ah., waxaa jira wakhtiyo aanay jirin iibiyayaal ama iibsadayaal bangiyada ah. Tani macnaheedu waxa weeye hadii aad doonayso in aad suuqa kusoo gasho ganacsi ah 1.3001 aysan jirina bangi kugula gorgortam qiimaha, waxaad heli doona qiimaha ugu macquulsan ee ku xiga. Tani waa qeexida rasmiga ah ee Slippage ama re-quote.
FXPRIMUS laf ahaanteed way ka gedisan tahay la tartamayaasheeda kale iyadoo bixisa helitaanka badan iibsade ama iibiye, tani macnaheedu waxa weeye waxaaad haystaa fursada ugu fiican ee aad suuqa halka uu marayo ka gali karto, qiimaha aad dooneysid. Macaamiisha FXPRIMUS waa inay fishaan si dhaqso ah in loogu fuliyo gelida halka uu suuqu marayo mar walba, laakin sidoo kale waa inay filayanayaan inay dhacdo marmar Slippage ama re-quote wakhtiyada uun suuqu xooganayn. Si kastaba ha noqotee, tijaabada dhabta ah ee shirkadaha dilaalka ee gelintaanka suuqa halka uu marayo, ma aha inta jeer ee macmiilku la kulmo Slippage, laakin waa sii kala xooganaanta Slippage. Waxaan si diiran kuugu martiqaadeynaa bal inaad anaga nagu tijaabiso waayo aragnimadaada ganacsi si aad u aragto sida ugu fiican nahay dhinaco badan.Furo akoon Live ah or a ama akoon tababarasho oo BILAASH ah.
Ma waxaad ku keydisaan servers isku mid barnaamijyada Akoonada LIVE ka ah iyo Kuwa Practice ah?
Waxaan ku keydinaa akoonada Practice iyo kuwa LIVE ah servers kala duwan si macaamiishu u tijaabiyaan hababka ganacsi iyo servers-ka ay ardaydu wax ku baranayaan taas oo aan saamaynin waxqabadka iyo sharafka servers-ka Live ah.
Waxaan rabaa in aan fiiriyo labada barnaamij wakhti isku mid ah (Akoonka LIVE ka ah iyo ka tababarka) Taasi suurtagal ma tahay?
Barnaamijka ganacsiga ee MT4 waxa uu ogolyahay soo kicinta hal barnaamij oo keliya wakhtigiiba halkii kombiyuutar maskaxeed ba. Waxaad ubaahan doontaa inaad kala qaybiso CPU-ga ama aad soo kiciso Virtual PC
Nidaamka la raacayo ee Akoon Furashada
Maxay yahiin tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah in la furto akoon LIVE ah?
Si aad u furato akoon LIVE ah, fadlan guji halkan oo dhameystir hanaanka fudud ee 3-da tilaabo ah si aad u bilowdo ganacsigaaga:
Tallaabada 1: Diwaangalinta AKoonka ee Online ah (VU)
Ku buuxi foomkeena diiwaangelinta fudud xogtaada:
Tallaabada 2: Xaqiijinta emaylka
Hadda akoonkaaga waa la furay. waxaad ku heli doonta fariin emaylka aad isku diwaangalisay. Si fudud u guji linkiga Emyalka Xaqiijinta, waxaad si toos u gali doonta goobta xubnaha (members area):
Tallaabada 3: Dhameystir Diiwaangelintaada
Waxaad hadda awood u leedahay in aad dhameystirto diwaangalintaada; guji badhanka "Dhamaystir Diwaangalinta" ee goobta xubnaha oo dhameystiran waaxaha: Faahfaahinta shakhsi ahaaneed, Aqoonta Ganacsiga iyo Khibrada, soo gelinta dukumiintiyadaada iyo doorashada nooca akoonkaaga ganacsi ee aad jeceshahay inaad furato.
Marka aad dhameystirto, foomku waxa uu kaa codsan doona inaad aqbasho shuruucda adeegayaga. Qaybtan, website-kayaga ayaa kuu fududeyn doona in aad akhrido oo aad aqbasho shuruudaha sida ku qeexan dukumiintiyada kala duwan ee PDF.
Waa maxay sababta aad usoo galinayo dukumintiyadayda?
PRIMUS Markets International, amnigu waa mudnaantayada koowaad, waxaanan ku dadaalnaa sidii aan u hubin lahayn in macaamiishayadu ay soo maraan caddaalad, waxku ool ah iyo waayo aragnimada ganacsi oo hufan. Iyada oo ay naga go'an tahay u hogaasanaanta maaliyadeed, waxaa laga codsanayaa macaamishayada iyo shurkaada inay soo galiyaan koobi la arki karo oo ah labadan dukumenti:
Cadeynta goobta deganaanshahaaga
SOO GALI DUKUMINTIYADAYDA HADDA!
Maxaan u isticmaali karaa caddeyn ahaan?
Kaarka aqoonsiga ee ay dowladdu soo bixiso
Kaarka Codbixinta (wadamada aan lasiinin Kaarka Aqoonsiga)
Maxaan u isticmaali karaa caddeynta deganaanshaha?
Waraaqaha Bixinta Biilasha ee: Gaaska, Biyaha, Korantada, Telefoonka, Internetka
Qaansheegyada caymiska caafimaadka / nolosha
Kaarka amaahda ama Dhaqdhaqaaqa Bangiga (6 bilood ugu dambeysay)
Aqoonsi sax ah oo muujinaya goobta aad degan tahay, oo la bixiyay 6dii bilood ee u danbeysay. Hadii aysan suurogal ahayn biilasha sare/ dhaqdhaqaaqa bangi ama dhaqdhaqaaqa kaarka deyn bixinta.)
Keen warqadda tixraaca bangiga oo xaqiijinaysa in goobta aad degan tahay (oo ah 6dii bilood ee ugu danbsay)
Buuga bangigu (waa in uu muujinayaa magaca qofka leh akoonka, goobta uu degan yahay, oo soo baxday 6dii bilood ee u danbaysay uuna xaqiijiyay bangigu).
Warqad tayaysan oo ka timi Qareen ama nootaayo taayo ay waajib tahay in la saxeexay lana shaambadeeyey. (lana bixiyay 6dii bilood ee u danbaysay uuna xaqiijiyay bangigu).
Ma u isticmaali karaa baasaboor aqoonsiga deganaanshaha?
Uma isticmaali kartid baasaboor cadeynta deganaanshaha. Dukumiintiyada la aqbalayo waa in ay ku jiraa magacaagu, cinwaankaaga deganaanshaha iyo taariikhda sheegaysa in lixdii bilood ee u danbaysay ay tahay cadayntu.
Tusaalayaasha dukumintiyada cadeynta deganaanshaha waxaa kamid ah: Waraaqda biil bixinta - sida biilka biyaha ama biilka laydhka, biilka taleefanka, ka Tv-ga ama dhaqdhaqaaqa bangi ama credit card. Sidoo kale waad isticmaali kartaa laysankaaga darawalnimada haddii ay dhicistiisu ka badan tahay 6 bilood.
Ma u isticmaali karaa Cinwaanka PO Box caddeyn degenaasho?
Ma aqbalno cadaymaha cinwaanada PO Box marka laga reebo wadamadan ku jira Golaha Iskaashisha Gulf (GCC) oo ay ku jiraan United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, and Oman.
Ma u isticmaali karaa hal dukumiinti labada nooc ee Aqoonsiga?
Maya. hadii kaarkaaga aqoonsiga aad u isticmaashay cadeynta degenaansho, waa in macmiilku isticmaala dukumenti kale si uu u cadeeyo aqoonsigiisa (Sida Passport).
Sideen u beddeli karaa cinwaankayga?
Fadlan noogu soo dir farin emaylka [email protected]cinwaankaagii hore iyo kan cusub. Hubso in aad ku darto lambarkaaga aqoonsiga MT4 iyo magaca aad ku adeegsato. Cadaynta cusboonaysiinta degenaanshuhu sidoo kale waa in ay la socotaa emaylkaaga.
Ma bilaabi karaa ganacsiga isla marka aan lacag ku shubto akoonkayga?
Maya, waxaan uga baahan nahay macamiisha inay dhammaystiraan diiwaangelintooda kahor inta aan loo ogolaan inay ganacsiga bilaabaan. Si kastaba ha noqotee, waxaan u ogolanaa macaamiisha inay akhriyaan oo keliya barnaamijyada ganacsi ee MT4 inta lagu gudo jiro muddadan. Maxaa dhacaya hadii akoonka lacag lagu shubo balse aanan soo gudbin dukumiintiyada layga baahan yahay? Macaamiisha waxaan siina 15 cisho inay kusoo gudbiyaan koobiga cadeynaya deganaanshaha 6dii bilood ee u danbeysay iyo koobi ah xaga hore iyo xaga danbe oo aqoonsigiisa ah. Hadii aanan helin dukumiintiyada lagaaga baahan yahay akoonkaagu wuu dhacayaa, lacagtana waxaa dib loogu celinaya halkii laga soo diray.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in la ansixiyo akoonka cusub?
Marka aan helno dhamaan dukumiintiyada lagaaga baahan yahay, ansixinta akoonka cusubi wuxuu qaata hal maalin oo kamida maalmaha la shaqeeyo.
Sideen usoo galiyaa dukumintiga aan ku matalayo qof kale (Power of Attorney)?
Waxaad kasoo galin kartaa dukumintigaaga cusub ee POA qaybta Power of Attorney ee goobta xubanaha. Dooro Update Option. Halkan guji si aad u gasho
Waa maxay magaca aan adeegsanayo iyo fure sireedku?
Macaamiishu waxay leeyihiin laba nooc oo ah 2 magaca adeegsi (Username) iyo 2 fur sireed (Passwrod) oo kala ah:
Macaamiishu waxay samaynayaan magaca ay ku adeegsanayaan iyo fure sireed marka ay furanayaan akoon cusub. Macaamiishu waxay u adeegsanayaan si u galaan Goobta Xubnaha (Members Area) ee FXPRIMUS.
FXPRIMUS waxay kuu samayn doonta Aqoonsiga MT4 IYO Fure Sireed macaamiisheeda ay ka hesho dhigaalka ugu horeeya. Macaamiishu waxay u isticmaalaan xogtan gelitaankan barnaamijka ganacsi ee MT4.
Waxaan hilmaamay Fure sireedki Goobta xubnaha ama magaca aan ku adeegsanayay. Maxaan sameeyaa?
Halkan guji si aad usoo celiso fure sireedki kaa lumay ama magaca aad ku isticmaalay. Si fudud u raac tilmaamaha ku yaal bogga.
Waxaan ilaaway Fure sireedkaygii. Maxaan sameeyaa?
Halkan guji si aad usoo celiso fure sireedki kaa lumay. Si fudud u raac tilmaamaha ku yaal bogga. Sidoo kale waxaad boggan u isticmaali kartaa inaad kusoo ceshato Fure Sireedka Goobta Xubnaha ama magaca aad ku adeegsanaysay.
Sideen ku badali karaa Fure Sireedkayga MT4?
Ujeeddooyin amniga awgeed, waxaan kugula talineynaa inaad beddesho fure sireedkaaga sirta ah ee MT4 ka dib gelintaankaaga ugu horeeya kadib. Tan waxaad ka samayn kartaa barnaamijka MT4 adoo dooranaya Tools > Options > Change.
Waxaan ilaabay magaca aan ku adeegsanayay MT4 (MT4 ID) ama fure sireedki Maxaan sameeyaa?
Si aad usoo celiso Cadaymahaagi Goobta Xubnaha, Fadlan isku day mar labaad linkiga xaga hoose:
Hadii aad garanayso cinwaanka emaylka aad isku diwaangalisay:
Ma dooran karaa magaca kasta oo aan rabo in aad ku adeegsado?
Magaca aad ku isticmaalaysaa waa in uu noqdaa 3 ilaa 32 xaruufood. Waxa aa ku isticmaali kartaa oo keliya a ilaa z, A ilaa Z, lambarada (0-9) iyo xariijin hoose (_). Haysku xidhiidhsanaado/no space Calaamada lama ogola Xuruuf si kale u qoran lama ogola. Fadlan ogsoonow, Magaca aad ku adeegsanayo mar dambe lama badali karo.
Ma beddeli karaa magacayga aan ku isticmaalayso?
Magaca aad ku adeegsanayo waxaa lagu xiriiriya xaqiijinta gaarka ee system-kayaga. Ma badali kartid magaca aad ku adeegsanayso.
Imisa akoon ayaan ka furan karaa halka magaca ee aan ku adeegsanayo?
Magaca aad ku adeegsanaysaa waa inuu khaas u yahay akoonkaaga. Waxaad yeelan kartaa ilaa 5 akoono ah halkii akoon cinwaanba (oo ay ku jiraan: Shakhsi, Shuraako, Shirkad, Dilaal iyo Affiliate).
Maxaa dalkayga loogu dari waayay liiska?
Shirkaddu uma fidiso adeegyadeeda deganeyaasha waddammo / xukun maxkamadeed gaar ah oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidnayn, Australia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea iyo USA. Shirkadda waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho liisaska kor ku xusan ee waddamada iyadoo ikhtiyaar u leh.
Akoono nooceeya ayaad bixisaan?
Waxaan bixinaa ganacsi ah Micro, Mini iyo Standard lot aad maamulanayso ama akoon la maamulayo. Sidoo kale waxaan bixinaa akoono aan ganacsi ahayn sida Dilaal (IB) iyo akoonka shuraako ah (Affilliate). Akoonadu waxay yeelan karaan noocyo khidamad ah Variable ama ECN Premier.
Waa maxay nooca lacagta ee akoonkaygu yeelan doono?
Waxaan bixinaa USD, EUR, GBP, SGD & PLN oo ah lacagaha ay akoonadu yeelan karaan.
Si kastaba ha noqotee, hadii maamule lacageed uu maamulayo akoonkaaga, nooca lacagta akoonkaagu waa inay u dhigantaa lacagta maamulaha akoonkaaga, Akoonka MAM. Tusaale ahaan, hadii maamulaha lacagtaadu uu ka ganacsado Doolar, akoonkaagu wuxuu noqonayaa Doolar, iyadoon loo eegayn lacagta aad dooratay markii aad isdiwaangalinasay.
Maxay taha khidmada Akoonka ECN Premier?
Markii aaad isdiwaangaliso akoonka ECN Premier, waxaad ogolaanaysaa inaad haysato 1 pip (oo u dhiganta qiyaastii 10 doolar) khidmada oo laga jarayo akoonkaaga waqtiga rasmiga ah ee u dhiganta heer kasta oo uu yahay standand lot-ka aad ku ganacsanayso. lot-ka yar ee ah (0.10) qiyaas ahaan waxaa la qaadi doona 1 doolar, lot-ka kasii yarna (0.01) waxaa la qaadi doona 0.10 doolar. Khidmadan waxaa la jari doona wakhtiga aad ka baxdo trade-ka. waana mid aan dib laguugu soo celin doonin. Marka ganacsigaagu u dhigmo 250 standard lot ama ka badan bishiisha, waxaad heli doonta qiime hoose oo khidmada oo ah 8 doolar halkii wareeg ganacsi ee standard lot (ama wixii kale ee u dhigmaya.) Sidaas daraadeed waxaan akoonkaaga ku dari doona 2 doolar lot trade kasta oo aad samayso. Tusaale ahaan, hadii aad samayasay ganacsi ah 300 standard lot intii lagugu jiray bishan, waxaan akoonkaaga ku shubi doona 600 doolar dhamaadka bishaas.
Waa maxay Affilliate?
Affiliate waxaa laga wadaa helitaanka dakhli aanad ku hawshoon adiga oo keenaya ganacsatada (traders) FXPRIMUS. Tan macnaheedu waxa weeye, waxaan ku bixinaa khidmada ganacsi kasta oo uu sameeyo qofkii aad soo gudbisay, markasta oo ay ganacsi nala sameeyaan. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad diirada saarto inaad soo liis gareyso dad cusub. Waxaan siineynaa dhamaan taageerada ay nooga baahan yihiin macaamiisha aad nooso gudbisay. Tani waa hab fiican oo aad naftaada ugu dajinayso dakhli fiiican oo abid kuu soconaya. Wax badan ka ogolw Barnaamijka FXPRIMUS Affiliate, si aad u xoogsato maantaba guji halkan
Waa maxay Dilaal Shirkadeed (IB)?
FXPRIMUS IB, waxaan bixinaa khidmad ganacsi kasta oo uu sameeyo macaamiisha aad soo liis gareysay eed usoo gudbisay FXPRIMUS. Iyadoo ay ku xiran tahay cadadka ganacsig ee uu sameeyey macaamilkaagu, waxaad heli kartaa khidmado badan. Sidoo kale waxaad heli kartaa in badan adiga oo diwaangalinaya Affiliates (Shurakada) ku hoos timaada, halkaas oo aanu bixinayno khidmad balaadhan dhaqdhaqaaqa ay saameeyaan shabakadiisu.
Marka aad tahay dilaal shirkadeed waxaad u baaahan tahay inaad siiso taageero dadka kuu diwaangashan oo aad nagu soo xidhiidhiso anaga xaalad kasta oo la xiriirta ganacsatada iyo Shuraakada (Affiliate) ee shabakadaada ku hoos yimaada. Dhamaan shirkadaha dilaalada ah waa inay leeyihiin ka go'naansho waxqabadeed, taas oo aan dib u eegis ku samayno waqti kadib. Waxaan sidoo kale su siinaynaa caawimaad shaqsiyeed si aan kaaga caawino inaad horumariso ganacsigaaga dilaalnimada.
Waxbadan ka baro barnaamijka FXPRIMUS IB.
Waa maxay Super IB?
Super IB waa magacaabis la siiyo dilaalada shirkada kuwaas oo keena ganacsi aad u tiro badan. Waxaa lasiiyaa xuquuq gaar ah, sida awooda ay ku keeni karaan shirkad dilaal, wakhtiyada qaarkoodna ay helayaan khidmad aad u saraysa.
Goorma ayaan helayaa lacagaha aad noo garantaan ee IB-ga?
Waxaan u bixinaa si maalinla ah. Hadii trade-ku ii xidhmay maanta, akoonkaga IB ga waxaa lagu soo shubi doona lacagta trade-kan berri.
Sidee FXPRIMUS iiga caawin kartaa helitaanka macaamiil badan anoo adeegsanaya website ii gaara?
Hel Banners-kuu ugu danbeeyey ee soo jiidasha leh, farshaxan online ah oo leh cabiro kala duwan oo ku haboon website-kaaga. Koodhka aad kusoo gudbinayso akoonkaaga dilaalnimada (IB) wuxuu hubin doona inaad ka hesho khidmadahaaga qof kasta oo kusoo biira FXPRIMUS isagoo adeegsanaya bannerskan.
Ma lihi website xoog badan -- sidee ayaan ku heli karaa soo gudbinta dadka ee online ka ah?
Weydii maamulaha dhanka xiriirka si uu kuugu sameeyo mid shakhsiyeed oo kuu gaar ah, oo ah kuwa loogu talogalay websites-ka dhexe. Adiga ayaa go'aaminaya waxa websiteku soo bandhigi doono, waxaan ku siindoona URL adiga kuu gaara, oo ku dhex jiro Koodhkaaga IB. Tani waa hab fiican oo lagu xoojiyo dadka aad online-ka ka helayso adoo adeegsanaya FXPRIMUS, adiga oo sii kobcinaya khidmadahaaga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan macaamiishayda ku jirta database-ka u diro emaylo laakin ma haysto adeegi iga caawin lahaa. Mala i caawin karaa?
Haa. Maamulahaaga xiriirka ayaa samayn karaa isaga oo ka socda dhanka FXPRIMUS si uu ugu diro emayl macamiisha database-ka ku jirto. Waxaan kaala shaqeyn doonnaa wanaajinta content kasta iyo farshaxanida aad jeceshay inay ka muuqato emaylkan, waxaan u diri doona shabakaddaada iyadoo ay ku lamaan tahay koodhkaaga IB. Xusuusnow waxaan u diri karno fariimo inta database kuugu jirta, maaha macamiisha kale ee u diwaangashan IB kale. Tan waxaa loo samaynayaa ilaalinta IB yada kale.
Ma u isticmaali karaa shaqaalaha suuqgeynta FXPRIMUS balaadhin ahaan ganacsigayga.
Haa. Hadii aad jeclaan lahayd si ku haboon, farshaxanimo khaas ah oo kaa caawinaysa keenida macamiil badan, waan kaa caawin karnaa. Kala hadal maamulahaaga xiriirka wax ku saabsan shuruudahaaga, waanan ku caawin karnaa.
Ma noqon karaa Khabiir Marti ah bogagga waxabarashada ee FXPRIMUS?
Hadii aad usoo gudbinayso macaamiishaasha casharo qiimo leh oo joogto ah, waad codsan kartaa noqoshada Khabiir Marti ah boggayaga casharada. Waxaan kuu abuuri doona bogg adiga kuu khaas ah, oo la socdo sawirkaaga iyo taariikh nololeedkaagu, waxaanan hubin doona in lasoo galiyo casharadaada halkaa. Waa madal wax ku ool ah oo firfircoon oo macaamiishaadu ay ka geli karaan casharadaada, oo xitaa waad u adeegsan kartaa bogaggan aalad aad kusoo jiidato macaamiil. Macmiil kasta oo iska diwaangaliya FXPRIMUS isaga oo adeegsanaya bogga Khabiirka Martida, waxaan ku xiriirin doona Koodhkaaga IB, kaa caawinaya kordhinta khidmadahaaga.
Maxay yihiin waxbarashada aan soo galin doono Boggayga Khabiirka Martida ah?
Waxaan ku dari karnaa waxkata oo aqoon la xiriira oo ku iman kara fiidiyowyaal, Sawirro iyo Qoraal intaba. Sidaa awgeed hadii aad duubayso aqoon-isweydaarsi online ah, falanqayn suuqa ah, samaynta sawiro, dhamaan macluumaadkaan waxaan ku dari doona boggaaga. Dhamaan macluumaadka aad soo galinayso boggaaga waa in ay hubinayaan waaxda dabagalka iyo baarista si ay u hubiyaan in macaamiishayadu ay heli karaan qoraalo la hubiyay, amni ah oo akhlaaqiyana wanaagsan.
Waxaan rabaa inaan u qabto munaasabado qaar macaamiishayda iyo dadka kale een soo dhaweynayno. Ma i caawin kartaa?
FXPRIMUS waxay ku taageerta iskaashadtadeeda munaasab kasta oo ay qabanayaan, ay ku jiraan munaasabadaha sadaqada, cashooyinka, seminaarada iyo kuw kaloo badan. Adoo adeegsanaya Bushada Seminarkeena (oo dhawaan soo bixi doonta), shuraakadayadu waxaa la siin doona booskaadho soo jiidasho leh, banners-ka la qotomiyo, iyo adeegyo kale oo xayaysiin ah oo ka caawin doona munaasabadooda tan ku xigta. Weydii maamulahaaga xiriirka macluumaadka dheeri ah oo ku saabsan bushqada seminaarada.
Sideen ku heli karaa Shahaadada IB?
Shuraakadayada waxaa la gudoonsiiya shahaadooyin iyadoo loo eegayo heerka wada shaqayn ee ay la leeyihiin FXPRIMUS. Tani waa dukumenti shakhsiyeed oo la xaqiijiyay, sheegaysa hogaaminta iskaashi ee shirkadda, in badan oo ka mid ah IB waan u hanweyn nahay. Shahaadadu waxay astaan u tahay iskaashiga aad la leedahay shirkad heer caalami ah, abaalmarin la siiyay iyo dilaal dhiirigaliye ah. Kala hadal maamulahaaga xidhiidhka si uu u hubiyo inaad u qalanto, way ku farxi doonaan inay kuu diyaariyaan shahaadadaada.
Shuruudaha Shaahaadada Iskaashiga Gobol
Tirada Macamiisha Waxqabadka leh 1-5 6-10 11-25 26+
Dhigaalkooda Guud $500 $150K $500K $1M+
Mudada ay la hawl galayeen FXP 1 maalin 3 bilood 6 bilood 1 sano
Waa maxay PAMM?
Adeega PAMM waa software xal ah kaas oo suurogal ka dhiga in laga soo raro hawlgallada ganacsi Master Account oo loo raro Akoonada Followerska ah, sidoo kalana caawiya in otomatiga laga dhigo qaybsashada Khasaaraha/faa'idada. Maamulayaashu waxay ku shaqeeyaan lacagahooda shaqsiyadeed iyagoo adeegsanaya Akoonka PAMM, istiraatiijiyaddooda ganacsina ayaa lagu dul koobiyeyaa dadka lacagaha iska leh. Waxqabadka Akoonka PAMM waxa laga fiirin karaa oo laga taxliilin karaa isticmaalka qalabka horumarsan ee kugu siinaya xogta qaababka sawirka iyo dhijitaalka ah.
Lacag noocee ah ayaan ku isticmaali karaa adeegga PAMM?
Maxay yihiin khidmadaha halkii lot-ba?
10 doolar halkii lot-ba
Maxaan u baahnahay si aan u noqdo Masuul (Master)?
Waxaad u baahan tahay inaad ka furatid akoon live ah FXPRIMUS.com oo aad samaysato Aqoonsiga Maalgashi MT4. Kadib booqo https://pamm.fxprimus.com si aad u furatid akoonkaaga PAMM. Si aad u furato akoon master ah oo aad u awoodo inaad aqbasho cida wax kugu soo darsanaysa, waxaad u baahan tahay inaad samayso dhigaal ah: $500 doolar
Maxaan uga baahany in aan noqdo Follower?
Waxaad u baahan tahay inaad ka furatid akoon live ah FXPRIMUS.com oo aad samaysato Aqoonsiga Maalgashi MT4. Kadib booqo PAMM.FXPRIMUS.com si aad u furatid akoonkaaga PAMM oo aad u bilowdo maalgashiga.
Maku maalgashan karaa akoonka PAMM si islaami ah/akoon ka madaxbaanan dulsaarka/ribbada?
Haa - Markii laga helo codsi
Waa maxay Margin call & Stop out?
Margin Call waa margin ka yar 50% halka Stop Out uu yahay Heerka Margin ee ka yar 30%.
Waa maxay faa'idooyinka Followerska?
Followerku (ma ahan Master) wuxuu leeyahay xuquuqda gaar ahaaneed oo ugu qaybinayo ugala noqon karo lacagaha wakhti kasta, hadaba xaalada sheegaysa hadii maamuluhu (master) uu la baxsado lacagta ama uu ku guuldaraysto in uu sameeyo macaash. Followers-ku waxay awood u leeyihiin inay proposol ay bixinayaan u qoraan Parameters-kooda.
Dhamaan heshiiska hawlgallada (qaybinta faa'iidooyinka, khasaaraha iyo khidmadaha Master-ka) waxaa si toos ah u fuliya Adeegga PAMM.
Adeegga PAMM wuxuu fududeeyaa habraaca xulashada masterka kartida leh ee ay isku halayn karaan Followers-ku, iyadoo la siinayo qalab dhameystiran oo qiimeyn ah, korjoogteynta guud iyo qiimeynta waxqabadka ee akoonada PAMM. Macluumaadka waxaa loo soo bandhigayaa qaab si fudud loo fahmi karo, si followerska khibrada lihi iyo kuwa aan khibrada lahayni ay ugu fududaato doorashada Hogaamiyaha (Master-ka) ugu fiican.
Waa maxay faa'idooyinka Masterku?
Adeegga PAMM wuxuu u oggolaanayaa Master-ka inay dejiyaan heshiisyo kala duwan oo ah la xiriira followerska kala duwan ah ee wata lacagaha kala gedisan iyo sida khatartu noqonayso.
Adeegga PAMM wuxuu si gaar ah u keydiyaa diiwaangelinta akoon kasta, faa'iidooyinka iyo khasaaraha waxaa si otomaatig ah u qaybiyaa nidaamka u dhexeeya Masterka iyo Followerska iyadoo lagu saleynayo saami qaybsiga lacagaha loo qoondeeyay, si koox kasta ay u hesho qaybteeda lacag celineed. Waxay sidoo kale dammaanad qaadaysaa wadaagida faa'idada iyo khasaaraha oo ku jaango'an wakhtiga iyo shuruudaha heshiiska, taas oo Master-ka iyo Followersku ku heshiiyeen. Tani waxay u oggolaaneysaa Masterka inay xooga saaraan ganacsiga.
Followerska awoodi kara waxay samayn doonan ikhtaaraadkooda iyagoo ku salaynaya sawirada waxbadka ee muujinaya natiijooyinka ganacsigii hore ee Masters ka
Ma u wareegi karaa Master kale?
Haa, macaamiishu waxay badalan karaa Masters hadii ay doonaan. Si taas loo sameeyo, waxay u baahan yihiin inay ka guuraan Master-ka koowaad si ay u maalgashan karaan Master kale oo cusub.
Ma bixisaan awooda maamulida akoono dhawr ah hal waqti oo isku mid ah?
Haa, Maamulayaasha Lacagta waxaan ugu talogalnay nidaamka xoogan ee MAM kaas oo maaraynaya lacagta akoono aan bar dhamaad lahayn. Wax badan ka baro Akoonada MAM adoo lasoo xiriiriya [email protected]
Sideen uga noqon karaa maamulida akoonka?
Hadii aad xiisaynayso inaad ka noqoto POA, waa inaad fariin u dirtaa maamulahaaga lacagta adoo ogeysiinaya inaad kala noqotay warqada ogolaansho siinta ee POA. Tani waxay u oggolaaneysaa Maamulaha lacagta:
In uu xiro positions-ka furan ama taagan ee akoonka.
Codsashada wixii faaido ah ee la wadaagayo ama fee-ga halw qabashada
Fadlan ku koobiye fariinta emaylkan [email protected] Hadii maalin shaqo oo dhameystiran aanad wax jawaab ah kaga helin maamulaha lacagtaada (waxaad fariin uga dirtay MM arabcadii, wax jawaabana kamaad helin ilaa jimcihii), waa inaad la xiriirtaa [email protected] anaga ayaa kaa caawin doona kala laabashada warqada ogolaansho siinta ee POA.
Goorma ayaan helayaa bixinta khidmada MAM-kayga ee akoonada la maamuulayay?
Waxaan bixinaa khidmadaha MAM, mudo aan ka danbaynayn 15ka bisha soo socota
Waa maxay cabirka ganacsiga ugu yar?
Cabbirka ganacsiga ee ugu yar waa 0.01 lot.
Leverage waa isticmaalka aaladaha maaliyadeed ee kala duwan ama raasamaal lasoo amaahday, sida Margingka , si loogu siyaadiyo lacagta kasoo noqonaysa maalgashiga. ka hor inta aadan ogaan leverage iyo qaabta loogu isticmaalo ganacsiga FXPRIMUS, fadlan si taxaddar leh u akhri Digniinta Khatarta ah ee Leverage:
LEVERAGE WAXA UU XOOJIYAA KHASAARAHA AMA FAA'IDADA. ISTICMAAL LA'AANTA MAARAYNTA KHATARTA, LEVERAGE-KA AADKA U SAREEYA WAXA UU KUGU HOGAAN KARAA KHASAARE BADAN. FXPRIMUS waxay bixisaa heerar kala duwan oo leverage ah iyada oo ay ku xidhan tahay nooca akoonka iyo hadhaaga ku jira. Leverage ay bixiso ee u yari waa 1:1 marka uu u sareeyana 500:1. Shaxdan soo socda ayaynu isticmaalaa doona in aynu ku qeexno heerarka kala duwan ee marginka laga helo FXPRIMUS:
Sida kor ku xusan, Leverage la heli karaa waa kala duwanaan karaa iyadoo loo eegayo nooca akoonka iyo hadhaaga ku jira. Fadlan fiiri dib u eegista dokumentiyada Sharciga ah ee FXPRIMUS
Ma badali karaa Leverage akoonkayga?
Haa. Marka hore hubi in aad wada xidho dhamaan positions-kaaga Kadib noogu soo dir fariin [email protected] Hubso in aad soo raaciso magaca aad ku adeegsato iyo akoon lambarkaaga codsigaaga. Waxaan ku farxi doonnaa in aan ku tixgelinno badalida leverage-ka akoonkaaga hal maalin gudaheed.
Miyaad wax khidmad ah ku dartaan Spreads-ka?
Wax khidmado ah kuma dalacno Variable Spreads-ka. Waxaa jira 10 doolar oo lagu soo dalaco akoonada ECN Premiere Spread halkii wareeg lot standand
Waa maxay farqiga u dhexeeya Commission iyo Swap?
Commission (mushqaayad) ku waa lacagta ay maamulayaashu ku dalacaan halkii ganacsiba. Swap waa xaddiga lacagta akoonkaaga lagu shubayo ama lagu soo dalacayo iyadoo ay ugu wacan tahay sarifyada kuu furan ee habeen uu soo kala dhexgalo.
Xageen ka heli karaa sicirka uu marayo Ribaddu (Swap)?
Si aad u hubiso Sicirka Swap-ka fur barnaamijka MT4. kadib right click ku dul samee lacagaha the market watch panel. Kadib guji Symbols. Inta kadib guji weydiinta currency pair Kusii dhufo Properties Halkan waxaad ku arki kartaa sicirada Swap-ka gaaban iyo kuwa mudada dheer.
RIBO La'aan ma lagu isticmaali karaa SALIIDA (OIL)?
Spot Oil-ka (WTI & Brent) waxaa jira fee lagu keydiyo oo maalinle ah, kaas oo lagu soo dalaco dhamaan akoonada swap-ka leh iyo kuwa ay ka maqan tahay labadaba.
Ma bixisaan ganacsi swap-free ah oo la xiriira TRY currency pairs?
Maya. xitaa hadii akoonkaagu swap-free uu yahay, waxa wali lagu soo dallaci doona swaps dhamaan positions furan ee TRY pairs
Spread nooce ah ayaad bixisaan?
FXPRIMUS waxay ku faraxsantahay inay bixiso laba nooc oo Spread ah: Variable and ECN Premier Spreads.
Waxaan ku weydiin doona kaad doorato marka aad isdwaangalinayso akoonkaaga Practice ah ee bilaashka ah ama marka aad samaysanayso akoon ganacsi oo LIVE ah. Ma badali kartaa aragtidaada kadib marka aad isdiwaangaliso, had iyo goor waxaad ka badali kartaa nooca Spreadka goobta xubnaha (members area).
Baro xog dheeri oo la xiriirta noocyada Spreadka.
Waa maxay Variable Spread?
Variable Spread maaha qiime joogto ah. Way fidi doonta wayna soo ururi doonta iyadoo ku salaysan xaaladaha suuqa iyo isadalada liquidity-ga. Caadi ahaa, markasta oo suuqu noqdo mid ay ku jiraan sellers iyo buyers (Volatile) badan Variable Spread waxay noqonaysaa mid fidsan marka dhaqdhaqaaqa suuqu hoos u dhaco, bangiyadu aanay rajaynayn inay sooo galaan halka uu suuqu marayao.
Maaddaama FXPRIMUS ay tahay 100% mid quman iyadoo adeegsanaysa shirkadaha dilaalinta, waxaad awoodi doonta inaad si toos ah u dhexgasho suuqa adigoo adeegsanaya xogaha bangi. Hadii qiime la heli karo, ganacsigaagu wuxuu ka gali kara qiimahaas iyadoo aysan jiran qof idiin dhexeeya ama farac saddexaad oo idin dhexdhexaadinaya kuu doobana ha noqdee.
Si Live ah u fiiri Variable Spreads ama isbarbardhig noocyada Spreadska
Si aad u furato Akoon Variable Spread Live ah, waxaa lagaaga baahan yahay dhigaal ah 100 doolar.
Waa maxxay ECN Premier Spread?
ECN Premier Spreads waa nooca ugu badan ee ay doortaan dhamaan traders-ku. waxaa jira oo la heli karaa spreads ugu adag oo ay ku tartamaan shirkadaha oo kale leh qiimeyaal kala duwan oo loogu talogalay akoonada ganacsatada multi-millionareska ah;
Third or fifth decimal point, sub-pip spread ayaa iyaguna la heli karaa (iyadoo ay ku xidhan tahay nooca lacagta).
Tani waxay ka dhigan tahay inaad save gareysay lacag dhaqdhaqaaq kasta.
Mar danbe ma bixinaysid Wider Spreads marka aad suuqa bartamaha ka galayso.
Ku raaxayso khibradaada ganacsi.
Gabi ahaanba ma jirayso waqtina REQUOTES*.
Tani waa mid muhiim u ah macaamiisha rabta inay si degdeg ah u galaan ugana baxaan trades-ka, maskaxdana aan ku hayn luminta pip aan nafbadan ku lahayn suuqan aadka u dhaqaaqaya. Si aad ug raaxeysato faa'idada Spreads-kan adag, waxaan ku dalacnaa khidmad ah 10 doolar halkii safar wareeg ee standard lot (1 doolar mini lots, 0.10 doolar micro lots)
Hadii aad samayso trade ka badan 150 standard lot bishiiba (ama wax u dhigma), khidmadayadu waxay hoos ugu soo dhacaysaa 8 doolar halkii safar wareeg ee standand lot, sidaa awgeed waxaan dib kuugu soo celinaynaa 2 doolar halkii lot trade!
Fiiri live ECN Premier Spreads
Si aad u furato Live ECN Premier Account,
Waxaa lagaaga baahan yahay dhigaal ah ugu yaraan 500 doolar.
Miyaad ku soo rogtan wax kharash dhamaadka trade-ka ?
Keliya ECN Premiere Spread ayaa lagu dalacayaa khidmadda. Waxaa jira 1 pip standard lot oo lagu dalaco nooca ECN Premiere Spread. Sidoo kale, hadii akoonkaga la maamulayo, waxaad aqbali doonta khidmado dheeraad ah oo uu yeelano maamulaha lacagtaada, adoo saxeexaya wixii xog ahna siinaya shaqaalahayag adoo adeegsnaaya Foomka Ogolaansho Siinta ee PAO.
Ma jirto wax commission ah oo lagu soo dalacayo akoonada Variable Spread.
Ma la ogolyahay Scalpers-ka?
Haa, Scalpers waa la ogolaaday, si kastaba ha noqotee waxaan usoo jeedineynaa isticmaalka akoonka ECN.
Maxay saacadaha suuqu?
Suuqu waxa uu furan yahay 5pm EST habeenimda axadda, wuxuuna xirmaa 5pm EST habeenimada jimcaha.
Maxay yihiin saacadaha dilaalku uu isticmaalo server-kaaga?
Servers-kayaga ayaa ku samaysan GMT+3 laga soo bilaabo Maarso ilaa Nofembar, hadana laga soo bilaabo Nofembar ilaa Maarso.
Ma waxaad tihiin dilaal suuqa samaysta (dealing desk)?
Maya. 100% FXPRIMUS waa shirkada dilaal oo suuqa dhexdhexaadka ka ah (STP) oo wax faragalin ah ku lahayn.
Maxay ka kooban yihiin Micro, Mini and Standard lots?
FXPRIMUS, waxaad trade ku samayn kartaa Micro, Mini iyo Standard lots adoo adeegsanaya hal akoon. Furo akoon maatan akoon Live ah ama diwaangasho akoon practice oo bilaash ah. .
Mala ogolyahay yareynta khatarta (hedgin)?
Haa, yaranta khatarta waa la ogolyahay.
Sideen u yaraynta karaa khatarta ganacsigayga?
Waad yaranta kartaa khatarta ganacsiga adigaa oo si fudud uga ganacsanaya dhinaca kale. Tusaale ahaan, hadii ay tahay mid dheer 1 EUR/USD, waxaad si yar oo fudud u tagi kartaa ta gaaban 1 EUR/USD
Waa maxay deviation-ka ugu badani?
Deviation-ka ugu badani waa xadiga slippage ee aad rajaynayso inaad aqbasho. Tusaale ahaan, hadii suuqu yahay 1.5000 oo aad u gasho buy, hadii standard deviation uu yahay 2, waxaad rajaynaysaa inaad aqbasho qiime kasta laga soo bilaabo 1.5000 ilaa 1.5002. Tani waxay kor u qaadaysaa buuxinta fursaddaada qiimaha aad rabto. Waxaan kugula talineynaa in standard deviation uu noqdo 0-2.
Ma jiraa wax dammaanad qaadaya stop level-ka?
Waqtigaan la joogo, ma bixinno wax dammaanad qaadaya stop level. Xaaladaha suuqa ee caadiga ah, waxaad filan doonta inaad ku hesho qiimaha ugu liita oo ah hal pip ama laba. Xaaladaha suuqu volatile ka uu yahay waxaan isku dayeynaa inaan ku joojinayo qiimaha ugu macquulsan.
Ma leedihiin boqoleyda ugu yar ee Margin ah ka hor inta aydaan xidhin positions uu sababay Margin Call?
Auto Liqudidation waa 30%. waxaan badiyaa, laakiin aan ahay had iyo goor ahay ku xidhnaa position-ka marginka ugu sarreysa ee loo baahan yahay.
Waa maxay Market Order?
Market Order waa ka go'naanshaha shirkada dilaalka inay ku soo iibiso ama ku iibiso aalada maaliyadeed qiimaha ay hadda joogto. Fulinta dalabkan waxaa ka imanaysa inay furmaan trade position. Aalada maaliyadeed waxa lagu soo iibsadaa ASK price iyo waxaanu lagu iibinayaa BID price.
Tusaale ahaan, haddii EUR / USD lagu qiimeeyo [BID] 1.3000 / 1.3003 [ASK]. Waxaa loola jeedaa, si aad u iibsato 1 qayb oo EUR ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso USD 1.3003. Lacagta doolar ka ah 1.3003 waxaa sidoo kale loo yaqaan ASK price. Waa qiimaha uu ganacsaduhu doonayo inuu ku iibiyo. Dhanka kale, hadaad jeceshahay inaad iibiso EUR to USD, waxaad ku iibin doonta USD 1.3000. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa BID price, micnaheedu waxa weeye qiimaha uu ganacsaduhu doonayo in uu kaaga iibsado.
Sida aad ku arkayso tusaalaha sare, waxa jira farqi u dhexeeya BID iyo ASK price. Qiimaha u dhexeeya waxa la yidhaa Spread (khidmada dilaalka), wayna kala duwan tahay iyadoo hadba ku xidhan labada lacagood. FXPRIMUS ma dulsaarto wax commission ah variable spreads, maaddaama aan dulsaaranay boqolleyda BIDka iyo Ask Spreadka. Xaaladan oo kale, hadii aad ku gasho buy EUR position, waxaad hoos u dhici doonta 3 pip. Sidaas darteed, waa in aad sugtaa qiimaha price ka dhigaya [BID] 1.3003/1.3006 [ASK] si ay u noqoto break even (no loss no profit)
Stop Loss iyo Take Profit (sida ku qeexan xaga hoose) waxaa lagu lifaaqi karaa Market Order. Fulinta dalabyada suuqu waxay ku xidhan tahay hadba aalada laga ganacsanayo.
Waa maxay Stop Loss order?
Stop Loss order waxa loo adeegsadaa in lagu yareeyo khasaaraha hadii aalada laga ganacsanayaa ay u dhaqaaqdo jiho aan macaash ahayn. Hadii qiimaha aalada laga ganacsanayaa uu gaaro heerkan, positionku si otomaatik ay ayuu isku xidhi doona. Dalabyadan noocan oo kale ayaa lagu xiraa, positions ka furan ama dalabyada taagan ee aan wali lasiidayn. Shirkadda dilaalka ayaa hal meel dhamaantood wada dhigi karta oo keliya suuqa ama dalabyada taagan. Macmiilka ayaa hubiya positions dhaadheer in qiimaha BID uu la kulmi doona dalabkan uu bixiyay iyo isticmaalka qiimaha ASK positions gaagaaban.
Tusaale ahaan, EUR / USD waxa uu ka ganacsanaysaa 1.3000 / 1.3003. Waxaad galisay dalab aad ku iibsanayso Euro oo ah 1.3000. Si lagaaga caawiyo maaraynta khatarta, waxaad u dajinaysaa qiime lagaaga xidho (Stop Loss order) halkaas oo position-kaaga si otomaatik loogu xidhi doono qiimahaas. Hadii aad ka dhigto Stop Loss 1.1.1950, marka qiimaha EUR/USD uu gaadho 1.2950/1.2953, waxaad suuqa kala baxaysaa khasaare dhan 53 pips. 1.3003 [entry price] -1.2950 [close price] = 0.0053. Fadlan ogsoonow: Stop Loss lama dammaanad qaadi karo, maadama dalabyo aanay jirin. Wakhtiyada uu suuqu Volatile uu yahay, dalabkaaga ma awoodi karno in dalabkaaga aanu ku hayno stop order-ka, waxaad heli doonta qiimaha ugu macquulsan ee lagu joojiyo.
Si aad otomaatik uga dhigto Stop Loss order-ka si uu uraaco qiimaha, waxaad adeegsan kartaa Trailing Stop (ka eeg xaga hoose).
Waa maxay Trailing Stop?
Sida aan kor ku soo sheegnay, Stop Loss waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha marka aalada aynu ka ganacsanaynaa ay u dhaqaaqdo jiho aan macaash inaga soo galayn. Taa baddalkeed, haddii position-keenu uu noqdo mid macaash leh, Stop Loss waxaa si manual ah loogu badalayaa break even level. Si aan hawshan otomatiga uga dhigto, Trailing Stop ayaa la sameeyey. Qalabkani waa mid faa'ido leh marka qiimuhu si adag isku badalayo jiho isku mid ah ama marka aysan suurogal ahayn in la daawado socodka suuqa.
Trailing Stop badana waxaa lagu lifaaqa positions ka furan ee ka shaqaynaya goobta macmiilka, ma aha serverka kale sida Stop Loss-ka. Isla marka dhibcaha macaashka ay noqdaan kuwa lamid ah ama ka badan heerkii loo cayimay, Trailing Stop ayaa amar otomaatig ah siinaya goobta Stop Loss orderka. Heerka dalabka waxaa la joojiya masaafo go'an iyada oo la eegayo qiimaha ay hadda tahay. Intaa waxaa dheer, hadii qiimuhu u dhaqaaqo jiho macaash badan, Trailing Stop wuxuu ka dhigii doona heerka Stop Loss mid si otomaatik ah u raaca qiimaha. Si kastaba ha noqotee, hadii position-ka faa'idadu uu hoos u soo dhaco, dalabka mar danbe lama xaqiijin karo. Maxaa yeelay, faa'idada trade-kaasi si otomaatig ah ayaa loo xadiday.
Sideen u dhex dhigi karaa trade-kayga Trailing Stops?
Trailing Stops wuxuu u shaqeeya si lamid ah sida Expert Advisors ku u hawlgalaan astaamahaas oo si locally ah ula shaqeeya Barnaamijkaaga MT4 ee ku jira kombuyutarkaaga (PC). Awood caawimaad uma lihin in muuqaaladaas aanu ku kicino servers-kayaga maxaa yeelay qalabkaasi kuma xidhna servers-kayaga.
Trailing Stop waa muuqaal u oggolaanaya trader ka inuu yareeyo khatarta uuna ilaaliyo macaashkooda. Muuqaalkaani waa mid muhiim ah marka aad xaqiijin ku samaynayso Stop Loss order si degdeg ah. Si kastaba ha noqotee, fadlan maskaxda ku hay inaad si dhaw ula socoto Trailing Stop maxaa yeelay sababta kasta MT4 wuu lumin karaa xidhiidhka (hadii update ama intern connectivity), muuqaalka Trailing Stop wuu is xidhi doona maxaa yeelay kuma dhagana servers-kayaga. Sidaas darteed ma qaadan karno mas'uuliyada Trailing Stops kaga timaada internetka ama ciladaha barnaamijkaas.
Waa maxay limit Order (Take Profit)?
Take Profit order waxaa loogu talagalay inuu xaqiijiyo macaashka marka aalada ganacsi ay gaadho heerki loogu talagalay. Fulinta dalabkan waxaa ka dhalanaysa xidhitaanka positon-ka. Had iyo goor waa mid ku xidhan position-ka furan ama dalabka taagan. Dalabkan waxaa la codsan karaa oo keliya iyadoo ay la socoto market order ama dalab taagan.
Tusaale ahaan, EUR / USD waxa uu ka ganacsanaysaa 1.3000 / 1.3003. Waxaad gashay dalab suuq oo ah inaad inaad ku iibsato EUR 1.3000. Si lagaaga caawiyo maaraynta khatarta, waxaad u dajinaysaa halka u saraysa dalabkaaga (Take Profit) halkaas oo position-kaaga si otomaatik loogu xidhi doono qiimahaas. Hadii aad ka dhigto limitka 1.3050, marka qiimahu gaaro EUR/USD 1.3050/1.3053, waxaad kala baxaysaa suuqa macaash dhan 50 pips. 1.3050 [close price] -1.3000 [entry price] = 0.0050.
Waa maxay pending order
Pending order waa ka go'naanshaha macmiilka ee shirkadda dilaalku ay kusoo iibinayso ama ku iibanayso aalad maaliyadeed qiime aan cayinayn mustaqbalka. Dalabyada noocan ah waxa loo isticmaalaa in loo furo trade position mustaqbalka la xidhiidha si loo gaaro qiimahaas aan cayinayn. Waxaa jira afar nooc oo ah dalabyada taagan oo la heli karo:
Buy Limit - buy waxay ina siinaysaa qiimaha lagu iibinayo mustaqbalka oo dhigma qiimihii hore loo dajiyay. Heerka qiimaha uu hadda joogo waa mid uu ka sareeyo qiimaha la galiyay dalabka. Dalabyadan noocan oo kale ah ayaa lagu galiyaa saadaalin ahaan iyadoo la filayo in qiimaha aaladan maaliyadeed ay hoos u dhici doonto ama kor u kici doonto;
Buy Stop - buy waxay ina siinaysaa qiimaha lagu iibinayo mustaqbalka oo dhigma qiimihii hore loo dajiyay. Heerka qiimaha uu hadda joogo waa mid uu ka hooseeyo qiimaha la galiyay dalabka. Dalabyadan noocan oo kale ah ayaa lagu galiyaa saadaalin ahaan iyadoo la filayo in qiimaha aaladan maaliyadeed ay hoos u dhici doonto ama kor u kici doonto;
Sell Limit - ell waxay ina siinaysaa qiimaha lagu iibsanayo mustaqbalka oo dhigma qiimihii hore loo dajiyay. Heerka qiimaha uu hadda joogo waa mid uu ka hooseeyo qiimaha la galiyay dalabka. Dalabyadan noocan oo kale ah ayaa lagu galiyaa saadaalin ahaan iyadoo la filayo in qiimaha aaladan maaliyadeed ay kor u kici doonto ama ay hoos u dhici doonto;
Sell Stop - sell waxay ina siinaysaa qiimaha lagu iibsanayo mustaqbalka oo dhigma qiimihii hore loo dajiyay. Heerka qiimaha uu hadda joogo waa mid uu ka sareeyo qiimaha la galiyay dalabka. Dalabyadan noocan oo kale ah ayaa lagu galiyaa saadaalin ahaan iyadoo la filayo in qiimaha aaladan maaliyadeed uu gaari doono heer cayiman, uu kusii socon hoos u dhac
Waa maxay Margin Call Policy?
FXPRIMUS waxay dejisay Margin Call Policy si ay uga ilaaliso macaamiisheeda inay lumiyaan lacag badan marmarka la barbardhigo ta ugu jirto akoonadoda, sidoo kale anagoo ilaalinayna danta shirkaddayada. Margin Calls waxaa la fuliyaa marka akoonka ay ku jirto raasamaal ka yar intii looga baahna in lagu ilaaliyo positions-ka furan ee macaamilka. Margin calls waxaa la active gareeya waqtiga rasmiga ah si otomaatik ah, waxayna dhacdaa marka raasamaalka akoonku (liquidation value) gaadho heer u dhigma 30% oo loo isticmaalo Margin. 30% waxaa loo yaqaanaa heerka dayactirka (maintenance level). Anagoo isticmaalayna barnaamijka ganacsiga ee MT4, positions-ka waa la xidhaa kahor inta aanu suuqu samayn dhaqdhaqaaq uu kaga soo horjeedo trades-ka u furan macmiilka.
Tusaale ahaan, aynu kasoo qaadno waxaad ku furatay akoon 2,000 doolar, waxaanad ku furtay shan x 0.1 lots (50,000 units) USD/CHF adoo adeegsanaya 1:50 (2%) Leverage ah. Sidaas darteed, 2% of 50,000 or 1000 doolar ayaa laga dhigi doona Margin, waxaad haysataa oo soo hadhay 1000 doolar, oo loo isticmaali karo Margin. Hadii dhanka ay u socdaan USD/CHF ay u dhaqaaqaan mid kasoo horjeeda position-kaaga, raasamaalkagu (Liquidation Value) wuxuu gaari doona 300 doolar marka loo eego dhigaalkagi hore ee 2000 doolar ahaa, tani waxay ka hor imanaysaa heerka dayactirka ee 30% ah. Sidaas darteed, waxaa si otomaatig ah loo xiri doona position-ka si looga hortago ilaalinta hadhaaga dayactirka, iyo in akoonkaagu sagxada uu taabto (negative territory).
Barnaamijka MetaTrader4 waxa uu isticmaalaa qaaciddadan soo socota marka la xisaabinayo heerka Marginka akoonka: (Account Equity / Used Margin) x 100 = Margin Level %
Inta waxa dheer, laba kale oo ilaaliyaal ah ayaa jira si loo ilaaliyo macmiilka iyo shirkaddayada labadaba. Marka Margin levelka akoonku hoos u dhaco ama wax ka hooseeya 100%, macaamilku waxa uu awoodi doona oo keliya inuu galo dalabyada u qalma positions-kan. Fadlan ogsoonow in macmiilku aanu awoodi doonin inuu furo positions cusub hadii Margin levelku yaala uu negative yahay. Intaa waxa sii dheer, marka Margin levelka akoonku hoos u dhaco ama uu ka hoos maro 50%, macaamilku ma awoodi doono inuu galo positions cusub. Taabadalkeed, macaamilku waxa uu awoodi doona inuu ka baxo positions-ka u furan.
Nidaamka MetaTrader4 ayaa xiri doona mid kasta ama dhamaan positions-ka furan ee akoonkaaga hadii ay dhacdo in akoonkaagu ka hoos maro raasamaalki loogu talogalay. Guuda ahaan, marka ay jiraan laba iyo wixii ka badan ee positions kuu furan ah, waxaan xaq u leenahay in aan xirno ugu horeyn positions-kaas, isbadalka khasaaraha ee suuqa aadka isku badalaya marka raasamaalku gaadho wax kayar 30% open margin ah. Guud ahaan, positions-ka ugu balaadhan ayaa la hor xidhayaa ka hor inta aan loo iman kuwa yar yar. Si kastaba ha noqotee, Nidaamka MetaTrader4 wuxuu xiri karaa positions halista ugu badan wada. In kasta oo barnaamijka ganacsi ee MEtaTrader4 uu joojin karo marginka la adeegsaday, had iyo goor waa mas'uuliyadda macmiilka inay ka war hayaan isku dheelitirka hadhaaga akoonadooda wakhti kasta.
Sideen uga ilaalin karaa nafteyda sababsashada Call Margin?
Barnaamijkayaga MT4 ayaa lagu naqshadeeyey sababsashada Margin Call, hadii Margin Level kaagu hoos u dhaco ama uu ka hoos maro 30%. Si aad uga hortago Margin Call, waxaad si buuxda u xadidaysaa dhamaan positons ka akoonkaaga. Xusuusnow in raasamaalka ay saameynayso boosaska furan hadii ay u qalmaan iyo in kaleba. Positions-ka furan ayaa kordhin kara ama yareyn kara raasamaalka iyadoo ay ugu wacan taahy dulsaarka habeen dhexa (overnight swap charges) iyo/ama balaarinta Spreads iyadoo ay ugu wacan tahay xaaladaha suuqu.
Sidaa daraadeed, hadii uu dheer yahay (buy order) 1.5 lots EUR/USD, si u limit gareyso positions-kan waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto short (sell order) 1.5 lots EUR/USD.
Xusuusnow tusaalaha sare, hadii aad gaabiso (sell order) 1.4 ama 1.6 lots, si dhameystiran uma ilaalin kartid, laakin waad inaad qayb ahaan aad limit gareyso.
Maka ganacsan karaa CFDs
Haa, waad ka ganacsan kartaa saliidaha (gasoline, oil, heating oil, natural gas) badeecooyinka (wheat, corn, soybeans, sugar, coffee) iyo major indexes (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones).
Waa Maxay Barnaamijka Ganacsi MetaTrader 4?
Barnaamijka ganacsi ee Metatrader4 waxa uu bixiyaa taxliilin farsameed, sawiro iyo La taliyayaal khubaro ah si ay uga caawiyaan inay horumariyaan istiraatiijiyadahooda ganacsi. Terminalka MetaTrader4 waa goob ganacsi oo si buuxda u qalabaysan oo u ogolaanaysa macaamiisha inay ku trade gareeyaan suuqyada maaliyadeed (Forex, CFDs and Futures). Waxay bixisaa qalabyada iyo kheyraadka muhiimka ee loo baahan yahay si loo taxliiliyo isbadalada suuqa ee aaladaha maaliyadeed, samaynta dhaqdhaqaaqyo ganacsi iyo sidoo kale abuurida iyo isticmaalka barnaamijyada otomaatig ka dhiga trade-ka (La taliyayaasha khubarada ah). Waad mid ku haboon, ka helida xalka hal meel, barnaamijka ganacsiyeedka ugu caansan adduunka oo idil.
Sideen ula soo dagi karaa Barnaamijka Ganacsiga ee MT4?
Markaad iskaaya diwaangaliso anaga, waxaan kusiin doona link aad kala soo degto MT4 kaaga. Waxaad sidoo kale kala soo degsan kartaa qaybta Downaload ee goobta xubnaha ee FXPRIMUS.
Wax lacag ah oo isku lamaan kuma arko MT4.
Fadlan ogsoonow inaad right click ku dhufato Market Watch Panel, dooro "Show All" si aad u hubiso inaad awood u leedahay helitaanka lacagaha isku lamaan ee aanu bixino.
Waxa aan galay barnaamijka MT4. Sawirku wuxuu sheegaya "Waiting for Update". Maxaan sameeyaa?
Si aad u xaliso xaaladan badal profile-kaaga MT4. Tan waxaad ku samayn kartaa adoo tagaya barnaamijka MT4 oo dooranaya File> Profile > hadii ay Default tahay u badal 'fxpforex'. Ama si fudud jiid oo siida lacagaha isku lamaan ee aad rabto inaad ku trade gareyso Market Watch Panel ka dushiisa dhanka sawirka madhan ee ku habboon.
Waa maxay waqtiga sawirada MT4
Waqtiga loogu talagalay Barnaamijka Ganacsiga ee MT4 waa ku degsan GMT+3 laga soo bilaabo Maarso ilaa NOfembar iyo GMT+2 kasoo bilaw Nofembar ilaa Maarso.
Maku shuban karaa Barnaamijka Ganacsiga taleefankayga gacanta?
Ku samaynta trade-ka mobilada wuxuu kuu oggolaanaya inaad maamusho akoonadaada qalabyada la qaadan karo ee uu ka mid yahay taleefanka gacanta, smartphone, iyo Pocket PC (PDA). MetaTrader4, trade-ka moobiladu wuxuu leeyahay xulashooyin taxliilin inta waxaa raaca maamulid dhameystiran oo akoonkaaga. Taleefoonnada waxaad ka helaysaa qaab ku haboon oo aad kula socon karto akoonkaaga marka aanad fursad u helin aad ku isticmaasho kombuyutarka.
Ilaa iyo hada, Barnaamijka Ganacsiga MT4 ayaa loo heli karaa in lagu isticmaalo Pocket PCs (PDAs) ku shaqeynaya Moobilada Windows OS iyo Moobilada Windows 2003, Smartphones ama wixii ka sareeya. Si aad ugala soo degto Barnaamijka Ganacsiga MT4 taleefankaaga, fadlan booqo qaybta Donwload-ka ee goobta xubnaha ama guji halkan
Sideen ugu soo dejin karaa Barnaamijka Ganacsi ee FXPRIMUS Iphone iyo Ipad?
FXPRIMUS iPhone / iPad app wuxuu kuu oggolaanayaa inaad samayso ganacsiyo adoo adeegsanaya lambarkaaga MT4 iyo furaha sirta ah, oo samee ficiladan soo socda: Geli live trades-ka iyo dalabyada taagan, fiiri taariikhda dalabyadii hore, xaqiiji trades, la soco dalabyada liveka ah, samee Stop Loss iyo Take Profit, fiiri sawirada.
Halkan guji si aad usoo dejiso MT4 mobilkaaga Android.
Halkan guji si aad ugala soo degto Apple App Store.
Maxay iiga soo horbaxaysaa fariinta 'Invalid Account' marka aan isku dayo in aan galo akoonkayga barnaamijka MT?
Fariinta 'Invalid Account' badanaa waxay muujineysaa inaad ku gashay cadaymo qaldan MT4. Fadlan hubso inaad gelisay aqoonsiga MT4 ee saxda ah, furaha sirta ah oo aad dooratay serverka saxda ah.
Haddii aadan awoodin inaad gasho barnaamijka MT4, fadlan email u dir [email protected] cinwaanka emaylkaaga kuugu diiwaangashan oo weydii horjoogaha inuu dib kuugu sameeyo fure sireedkaaga MT4.
Waa maxay sababta aan ugu arko koobi ganacsi Market Watch Panel-kayga?
Sababo la xiriira fulinta qaar ka mid ah CFD-da cusub, waxaad ku arki doontaa calaamado koobi cawlaan ah Market Watch window-gaaga. Calaamadahani wax saameyn ah kuma yeelanayaan akoonkaaga ganacsi si naba, waana laga bixin karaa. Sababo la xiriira xadayn Barnaamijka Ganacsiga ee MT4 ma awoodno inaan ka qarinno calaamadan akoonkaaga. Calaamadahaas waxaa looga baahan yahay xisaabinta dhigaalka akoonadaada aan ahay doolar. Nasiib darrose, ma awoodo inaan ka qarinno calaamadahan koontadaada laakiin waxaad ku sameyn kartaa sidaas gudaha barnaamijka MT4. Si aad u qariso calaamadaha cawlaanka ah, right click ku samee calaamadaha cawlan oo dooro hide.
Waa ayo lacag bixiyeyaasha FXPRIMUS?
Dhammaan lacag bixiyeyaasha waxaa laga heli karaa adigoo booqanaya boggayaga maalgelinta internetka iyo goobta xubnaha. https://www.fxprimus.com/so/int-account-funding
Waa maxay khidmadaha socodsiinta ee lacag bixinta eMerchant?
FXPRIMUS ayaa dabooli doonta dhammaan fee-ga iyo khidmadaha dhaqdhaqaaqa macaamil kasta oo la xiriira dhigaalada iyo lacag la bixitaanada.
Waa intee in leeg waqtiga lagu process gareya Credit Cards-ka?
Dhamaan dhigaaladu waa kuwo degdeg ah laakin waxay qaadataa hal maalin. Lacag dhigashada kaarka waxaan codsanaa koobi kaarka ah iyo dhaqdhaqaaqa bangiga ujeedooyin amni awgeed. Waa inaad qarsataa dhamaan lambarada kaarka marka laga yimaado 4ta lamabar ee u danbeeya kaardhka. U dir dukumiintiyada caddaynta ah [email protected].
Ma jiraa xad xadidan oo Card Processors ka ah?
Xadaynta oo dhan waxaa lagu muujiyey goobta xubnaha.
Waa maxay xulashooyinka kala duwan ee aan kula bixi karo lacagaha akoonkayga?
Dhamaan lacagaha waxaa dib loogu celin karaa halkii bilawgii dhigaalka laga soo sameeyey. Kadib dhamaan qaababka kala duwan marka lacagta lagu celiyo, waxaad awoodi doonta inaad la baxdo lacagaha adoo adeegsanaya Bank Wire.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa la bixida lacagta ee akoonka?
La bixida la adeegsanayo Bank Wire: 2-5 maalmaha shaqada.
La bixida la adeegsanayo Skrill: 1-2 Maalmaha Shaqada.
Dhamaan Qaababka lacagta lagula baxo.
Ma jiraan wax lacag ah oo laga qaadayo lacag la bixitaanka?
Maya, ma jiraan wax lacag ah oo laga qaadayo lacag kala bixitaanka FXPRIMUS.
Lacala hadii FXPRIMUS ay ka shakido in lagu xadgudbay siyaasada dhigaalka iyo la bixida lacagta (hadii ujeedka loogu shubay akoonka lacagta aan loogu talogalin in lagu ganacsado ama macaamilku uu u ganacsanayo meel ka hooseysa heerka ganacsi taaso si wakhti ah ay u kormeerto FXPRIMUS), FXPRIMUS iyadaa xaq u leh sheegashada dib u eegista fee kasta in aanu u gudbin macaamiisha ilaa waqtigaas.
Waxaan rabaa inaan lacag kaash kala baxo akoonkayga. Maxaan sameeyaa?
Fadlan ku buuxi codsiga la bixitaanka ee Members Area.
Haddii aad rabto inaad kala baxdo dhammaan lacagaha ku jira akoonkaaga, tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa inaad joojiso Ganacsiga. Haddii qof kale uu maamulo akoonkaaga, fadlan u dir codsi maamulaha lacagtaada inuu joojiyo ganacsiga akoonkaaga.
Hadii aad rabto inaad qayb ahaan la baxdo lacagtaada, waad sii wadi kartaa trade ilaa iyo inta aad haysatid raasamaal ku filan akoonkaaga kadib marka aad la bixitaanka samayso.
Ma jiraan wax xadidaad ah oo la socota lacag kala bixida akoonada?
Waxa jira ugu yaraan 10 doolar ama wax u dhigma lacag kula bixida Xawilaadaha (Wire Transfers). Iyo ugu yaraan 25 doolar dhammaan hababka kale. Marka laga reebo macaamiisha rabta inay kaash gareeyaan akoonkooda. Waad la bixi kartaa inta aad u baahan tahay markasta oo aad u baahatid.
Waa maxay sababta aanan kula bixin karin macaashkayga habkii aan lacagta dhigaalka uga soo sameeyey akoonkayga?
Waxaan u ogolnahay macaamiisha inay la baxaan intii ay soo deposite gareeyeen, iyadoo dib loogu celinayo halkii ay maalgashiga kasoo sameeyyeen, il kasta. Wixii lacag ah ee siyaado ah, taas oo ka dhalatay faa'ido, waxay kula bixi karaan dhamaan macaamiishu xawilaad bangi (bank wire). Macaamiisha qaarkood waxay kaloo haystaan eWallets oo ay kula baxaan, iyadoo ah ikhtiyaarka shirkadda.
Akoonkayga makaga shubi karaa lacag anigoo isticmaalaya hal qaab, makula bixi karaa qaab kale?
Siyaasadayada hadda waa in macmiilku uu lacagta kula baxo qaab lamid ah habkii uu akoonka lacagta ugu shubay.
Siyaasada lacag la bixida iyo lacag dhigidu ma khuseysaa shuraakada ay ku jiraan Affiliates iyo IBs?
IB's iyo Affiliates waxay leeyihiin awooda ay kula baxayaan lacagahooda iyadoon wax xadidaad ahini aanay jirin maadaama aanay dhigaal samaynin. Sida awgeed, siyaasada lacag la bixidu ma khusayso IB's ama Affiliates.
Yaan fariin caawimaad u diraa marka aan lacagaha la baxayo?
macaamiishu waxay fariin u diri karaan [email protected] shaqaalahayga carbisan ayaa kuugu jawaabi doona sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan.
Xaqiiqa aaan muxuu yahay Bitcoin?
Bitcoin waa lacagta kaashka ah ee internetka. Kaliya taleefan iyo kad internet, macaamiisha waxay u isticmaali karaan Bitcoin inay ku maalgeliyaan akoonkooda ganacsiga 'FXPRIMUS' isla markaaba meelkasta oo ay dunida ka joogaan.
Intee inleeg ayuu aamin yahay Bitcoin?
Lacagaha waxaa la xawili karaa oo keliya marka mulkiilaha saxda ah uu bilaabo dhaqdhaqaaqa lacagta. Arintani waata gaarka ka dhigtay lacag bixinada aaminka ah ee Bitcoin: foorjari lama samayn karo ama ogolaansho la'aanta waxba ma suurogalayaan.
Ku maalgalinta Bitcoin khatar khiyaamo ama xaditaanka aqoonsi ma igu keenaysa?
Maya, dhaqdhaqaaqyada Bitcoin ha gelin xogtaada shakhsiyeed ama xogtaada maaliyadeed.
Sidee lacag bixinta Bitcoin u shaqeysaa?
Marka macmiilku doorto inuu ku maalgaliyo akoonkiisa isagoo isticmaalaya Bitcoin, qaansheegta Bitpay ayaa si otomaatig ah usoo baxaysa.
Koodh QR ayaa ka muuqan doona shaashada - tani waa talaabo kale oo loo qaaday xag amni awgeed. Macmiilku waa inuu scan marayaa code-kan isagoo isticmaalay Smartphone Wallet app.
Taabo Send inta kadib lacag bixintaada waxaa loo dirayaa shabakada Bitcoin. Bitpay ayaa socodsiin doontaa Bitcoin-ka, oo siinaysa bangiga maxaliga ah dhigaalka iyadoo loo eegayo heerka sarifka isku badalashu marayo wakhtigaa.
Waa maxay dhigaalka ugu yar uguna badan, hadii aan rabo in aan u isticmaalo Bitcoin inaad qaab maalgashi?
Dhigaalka ugu yari waa 100 doolar, ma jiro dhigaal ugu badani!
Trade-ka maku samayn karaa Bitcoin anoo adeegsanaya FXPRIMUS?
Bitcoin ayaa hadda loo heli karaa aalad laga ganacsan karo FXPRIMUS, sidoo kale waad u isticmaali kartaa Bitcoin inaad ku maalgaliso akoonkaaga, oo aad dibna ugala baxdo Bitcoin.
Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa socodsiinta maalgalinta codsigeyga ee Bitpay?
Dhaqdhaqaaqan wuxuu qaadand doona in 1-2 saacadood lagu soo shubo akoonkaaga, marka aan ka helno xaqiijinta Bitpay. Dhigaalada waxaa laga dhigaa otomaatig lacagaha ka yar 5,000 doolar, wixii lacag ah ee ka sareeya 5,000 doolar waaxda lacag qabashada ayaa hubisa dhigaaladaa hal maalin gudahoodna ku socodsiisa.
Bitcoin Wallet noocee ah ayaan ku maalgashtaa akoonkayga?
FXPRIMUS waxay aqbali kartaa oo kaliya dhaqdhaqaaqyada lacageed ee bitcoin walletka ay kamidka yihiin Copay iyo Breadwallet iyo Mycellium.
Ma ku maalgashan karaa akoonkayga anoo isticmaalaya Bitpay, meelkasta oo aan daafaha caalamka ka joogo?
Bitpay waxaa loo heli karaa qaab maalgalinta ah dhamaan wadamada dunida oo idil. Fadlan eeg shuruudaha ganacsi ee dalalka aan ka shaqeyno.